FIKAMBANANA “MAFAMI” : Miantso fandraisana andraikitra ho an’ny tombontsoam-pirenena
Miantso fifampidinihana ho an’ny tombontsoam-pirenena ny fikambanana Mafami izay ivondronan’ireo mpianatra, mpiasa mpandraharaha, maintimolaly avy amin’ny faritanin’ Antananarivo miray. 1er avril 2019
Amin’ny maha fikambanana ivondronan’ny manam-pahaizana sy avara-pianarana azy ity dia isan’ny antom-pijoroany ihany koa ny fijerena ny olana sedrain’ny olom-pirenena eny anivon’ny fiarahamonina fa indrindra ireo voafonja.
Raha ny nambaran’izy ireo dia mananika ny 70 isan-jaton’ireo voafonja eto Madagasikara amin’izao no notanana vonjimaika eny am-ponja nefa tsy mbola voatsara akory. Isan’ireo voatana vonjimaika any am-ponja, ohatra, ny filoha mpitantana ity fikambanana ity teo aloha, izay notsipihin’izy ireo fa tsy mbola notsaraina akory.
Mety haharatsy endrika ny firenena malagasy eo amin’ny fanajana sy fampanajana ny tany tan-dalàna ary indrindra ny fanajana ny zon’olombelona, hoy hatrany ny mpikambana ao amin’ny Mafami ny fitarazohana mateti-pitranga toy izany ka angatahina ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny mahakasika ireo voafonja vonjimaika tsy mbola nandalo fitsarana ireo.